ကျွန်မတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ တစ်ခါတရံ အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ ပြဿနာတွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ တစ်ခါတရံအလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ဒီလိုအပြောင်းအလဲတစ်ချို့ကို သတိထားမိတယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဂရုစိုက်ပေးပါ။
၁။ သင်ဟာ အလွန်အကျွံပူအိုက်နေပြီး အရမ်းအေးနေတတ်တယ်
သင်ဟာ အခန်းအပူအချိန်အလိုက် သက်တောင့်သက်သာမရှိဘူးဆိုရင် သင်ဟာ ဟော်မုန်းမညီမျှတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းမညီမျှရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက အမျိုးသမီးမျိုးပွားမှုကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ estrogen အဆင့်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းက သင့်ရဲ့ ရာသီစက်ဝိုင်းကာလတစ်လျှောက်နှင့် သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ခါတရံမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ estrogen ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အတူ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Estrogen အဆင့်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ estrogen အဆင့်နိမ့်ကျနေတဲ့အခါ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ပူပြင်းပြီး estrogen အဆင့် မြင့်မားနေတဲ့အခါမှာတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ လက်တွေနဲ့ ခြေထောက်တွေဟာ တစ်ချိန်လုံး အေးစက်နေသလို ခံစားနေရပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဆံပင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ testosterone နိမ့်ကျခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟော်မုန်းမညီမျှခြင်းရဲ့ နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုက သင့်ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်တွေကို ကျွတ်ပြီး ကွက်ကွက်ပြီး ပြောင်လာရုံမက နောက်ဆုံး တစ်ခေါင်းလုံးပြောင်သွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အမွှေးတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂျိုင်းနဲ့ ခြေထောက်မွှေးတွေက သိသိသာသာပြောင်လာနိုင်တာမျိုးပါ။
၃။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတွေကို မစားချင်တော့ခြင်း
ဘာမှ မစားရသေးဘဲ ဗိုက်ပြည့်နေသလို ခံစားနေရပါသလား? အစာစားချင်စိတ်တွေက လုံးဝပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီလား? ၎င်းက အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ အူသိမ်တွေရဲ့အလေ့အကျင့်က ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ရာသီစက်ဝန်းကာလအတွင်း သွေးခဲများ ဆင်းခြင်း
အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ ရာသီကာလဖြစ်ပျက်ပုံတွေကတော့ မတူညီကြပါဘူး။ ၎င်းက ပိုပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပြီးဆုံးသွားတာတွေ၊ အရမ်းခံစားရတာမျိုးတွေ၊ တစ်ခါတလေ ဆေးရုံတက်ရလောက်အောင်အထိ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီကာလမှာ တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်ကျော်ကျော်အထိ သွေးခဲစီးဆင်းတာက အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ သို့ပေမယ့် ပုံမှန်ရာသီသွေးအရောင်က မှေးမှိန်လာပြီး သွေးခဲအရွယ်အစားကြီးလာတယ်ဆိုရင် ၎င်းက သင့်မှာ သားအိမ် fibroids ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာပါပဲ။ ၎င်းကပဲ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးစီးဆင်းမှုကို ဖြစ်စေတာပါ။
၅။ Workout လုပ်တဲ့အခါ နာကျင်တယ်လို့ ခံစားရခြင်း
သင်ပြေးနေချိန်/ လမ်းလျှောက်နေစဉ် နှင့် အချိန်ကြာကြာရပ်မိရုံနဲ့ တင်ပါးဆုံရိုးနာကျင်တယ်လို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းအလွှာဖြစ်တဲ့ endometrium မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ endometrial ဆဲလ်တွေနဲ့ အမာရွတ်တွေဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်းအင်္ဂါတွေနဲ့ စည်းနှောက်ထားမိတာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် နာကျင်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ မေးစေ့က ဝက်ခြံများ
ရာသီမလာခင် နှစ်ပတ်အလိုကတည်းက သင့်ခန္ဓာကိုယ်က estrogen နှင့် progesterone တွေက တိုးပွားလာနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဟော်မုန်းအဆင့်ကလည်း ပြောင်းလဲနေတာကြောင့် မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံတွေလည်း ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ခုလောက်ကြာပြီးတဲ့အခါ ပျောက်ကွယ်သွားသင့်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မေးရိုး (သို့) မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ ဟော်မုန်းတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ တော်တော်ဆိုးရွားနေပြီး လုံးဝမပျောက်တော့ဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြရပါလိမ့်မယ်။